Shimbir Basaas ah oo la qabtey oo muran diblumaasi ka dhex dhaliyey 2 dawladood – SBC
Shimbir Basaas ah oo la qabtey oo muran diblumaasi ka dhex dhaliyey 2 dawladood
Dawladaha aduunka ayaa tartan iyo hardan xoogan waxay ugu jiraan sidii midba uu ku heli lahaa macluumaadka iyo sirta dhinacyada military-ga, dhaqaalaha, siyaasada iyo farsamada hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoo xiligan adeegsiga Jawaasiista ay ka mareyso dunida meel aad fog.
Hadaba muran horleh oo dhanka diblumaasiyada ku jihaysan ayaa ka dhexqarxay xukuumada Turkiga & Yuhuuda (Isra’il) ka dib markii ciidamada sirdoonka Turkiga ay gacanta ku dhigeen Shimbir basaas ah oo ay Isra’il u soo dirtey dalka Turkiga.
Shimbirkan oo ah nooca loo yaqaan Merops Apiaster, ayaa xukuumada Isra’il waxay ku soo xirtey qalab electronic ah oo la shaqeynaya qalab kale oo yaal xarumaha sirdoonka Isra’il, kaasi oo ujeedadu aheyd in lagula socdo arimaha ciidamada Turkiga.
Saxaafada dalka Turkiga oo arinkan si weyn u hadal haysa ayaa sheegtey in shimbirkan Basaaska ah laga helay xuduuda Turkiga iyo Suuriya isagoo meyd ah, iyadoo shimbirkan ay lugta uga xiran yahay fargal (faraanti) ay ku qoran tahay Isra’il, iyadoo sidoo kale afka hore uu ku xiran yahay qalab yar oo electronic taasi oo cadeyn looga dhigay in uu yahay Basaas.
Masuuliyiinta wadanka Turkiga oo arintan aad uga caroodey ayaa ka dalbadey dhiggooda Isra’il inay jawaab deg deg ah ka soo bixiyaan shimbirkan Basaaska ah ee ay qabteen, laakiin Madaxda Isra’il ayaa sheegay in Shimbirkaasi uu yahay mid si qalad ah ku galey Turkiga ayna wasaarada Deegaanka Isra’il ku xirtey Fargalka isla markaana aan loola jeedin wax Basaasid ku shaqo leh.
Wargeyska Yediot Ahronoth ee maalinlaha ee ka soo baxa Isra’il ayaa Talaadadii qorey in arintan ay si weyn u saameysay dalka Turkiga, isla markaana wuxuu wargeysku muujiyey suurtagalnimada in sirdoonka isra’il ee loo yaqaan Mossad ay qalabka wax basaasa ku xireen Shimbirkaasi.
Isra’il ayaa isku dayeysa inay arintan ku xaliso hab isfaham xambaarsan isla markaana ay dajiso dawlada Turkiga oo arintan si weyn uga carootey, waxaana arintan ay ku soo aadaysaa iyadoo xiriirka labada dawladood waa Isra’il iyo Turkiga uu mudooyinkii ku tukubayey ulo boos ah ka dib dhacdadii ciidamada Yuhuudu ku laayeen 9 qof oo ah muwaadiniin Turkish oo u ololaynayey in Isra’il xayiraada ka qaado marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin.
Halkan ka daalaco Jaraa’idka Isra’il oo arintan ka faaloonaya